ဆူရီမီဆိုတာ ဘာလဲ၊ အဲဒါက ဘာနဲ့လုပ်ထားတာလဲ | Bezzia
Emilio Garcia | 13/01/2022 15:03 | အဆင့်မြှင့်တင် 14/01/2022 09:41 | မီးဖိုခန်း, နေအိမ်
စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အစားအစာကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ဖြည့်တင်းပေးမည့် အစားအစာများကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် အစဉ်အမြဲ ကြိုးစားနေပါသည်။ စူပါမားကတ်စင်များတွင် အခြားလတ္တီတွဒ်များမှ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ထုတ်ကုန်အသစ်များရှိသည်။ ဥပမာ, ပဲပိစပ်၊ quinoa သို့မဟုတ် ဆူရီမီ ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အံ့သြဖွယ်မြေထဲပင်လယ်အစားအစာများကို ၎င်းတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော ဂုဏ်သတ္တိများဖြင့် ဖြည့်စွက်ပေးသည်။ ဤနှင့် အခြားအစားအစာများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွင် ပေါင်းစပ်နိုင်ခြင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ မီနူးကို အာဟာရ၏သတ်မှတ်ချက်များတွင် ပိုမိုကွဲပြားပြီး မျှတစေသည်။ မီးဖိုများ ပူပူနွေးနွေး တွင် တရားဝင်မှု ရှိသည်- အချို့သော မေးခွန်းများ ပေါ်လာသည် ။ ဆူရီမီဆိုတာ ဘာနဲ့လုပ်ထားတာလဲ။
2 Surimi သတ္တိ
3 ဆူရီမီနှင့် ပရိုတင်းများ
ယေဘုယျအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အရသာအသစ်များကို မြည်းစမ်းကြည့်ရန် ပိုမိုပွင့်လင်းလာပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ စားသုံးသူအနည်းငယ်သည် ၎င်းတို့စားသော အစားအစာများ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိကြသေးပေ။ ဤအကြောင်းများကြောင့် ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခု မွေးဖွားလာပြီး ပိုမိုမြင်သာလာသောအခါ၊ ၎င်း၏အာဟာရဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများမကြာခဏပေါ်ပေါက်သည်။. ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင် ဆယ်စုနှစ်အတော်ကြာရှိခဲ့သော်လည်း မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆူရီမီဆိုတာဘာလဲ ဖွင့်ဆဲ။ လူများစွာအတွက်၊ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပင်လယ်စာ salpicón သို့မဟုတ် Basque gastronomy ၏ အရသာရှိသော ဟင်းလျာများအဖြစ် ဟင်းလျာများတွင် မြင်နိုင်သော ဘုံထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်နေပြီဖြစ်သည်။ အခြားသူများအတွက်၊ ၎င်းသည် ရိုးရာစပိန်ဟင်းလျာများ၏ ပုံမှန်ပါဝင်ပစ္စည်းများနှင့်မတူဘဲ အသစ်အဆန်းအတွက် ဆက်လက်ထင်ရှားသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အစာအိမ်ယဉ်ကျေးမှုတွင် Manchego ဒိန်ခဲ သို့မဟုတ် Iberian ဝက်ပေါင်ခြောက်ကဲ့သို့၊ ဆူရီမီသည် ကျွန်ုပ်တို့ကမ္ဘာ၏ အခြားတစ်ဖက်တွင် ရိုးရာထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။. ငါးထိန်းသိမ်းနည်းအဖြစ် ပေါ်ပေါက်လာသောအခါတွင် ၎င်း၏ဘိုးဘွားများ၏ မူလဇစ်မြစ်ကို ကျောက်ချရပ်နားထားသည်။ နာမည်ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ အရည်အသွေးတွေ ညွှန်ပြထားသလို သူ့ရဲ့ မူလအစက ဂျပန်၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်တစ်ထောင်ခန့်က နှင့်၎င်း၏အသုံးအနှုန်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ "minced ငါးအသားလွှာ” ထို့ကြောင့်၊ နေထွက်ရာအရပ်၌ ဆူရီမီသည် ဝက်အူချောင်းပေါင်မုန့် သို့မဟုတ် ဝက်အူချောင်းနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်စွပ်ပြုတ်များကို ပြုလုပ်ရသကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အနှောက်အယှက်မရှိဟု တွေးမိသည်။ အမှန်မှာ ဆူရီမီသည် အူဒွန် သို့မဟုတ် ဆူရှီကဲ့သို့သော နေ့စဉ်အခြေခံဂျပန်ဟင်းလျာများတွင်ပါရှိသည်။
ဆူရီမီဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကို ဖြေရှင်းဖို့ ကျန်နေပါသေးတယ်။ ဆူရီမီကို XNUMX ရာစုတွင် တီထွင်ခဲ့သဖြင့် အစားအစာ၊ ၎င်း၏ နည်းလမ်းများနှင့် နည်းပညာများ များစွာ ပြောင်းလဲလာကြောင်း ထင်ရှားပါသည်။ အထူးသဖြင့် ပြီးခဲ့သည့်ရာစုနှစ်များတွင် လက်မှုပညာသည်များ ထုတ်လုပ်မှုသည် ပိုမိုခေတ်မီသော အသေးစိပ်ပိုင်းကို ပံ့ပိုးပေးပြီး၊ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု အာမခံချက်အားလုံးနှင့်။ သို့သော် ဆူရီမီလုပ်နည်းကတော့ အတူတူပါပဲ။ 10 ရာစုနီးပါးအကြာ။ အရည်အသွေးပြည့်မီသော surimi ကိုရရှိရန်၎င်းသည်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည်။ အလွန်လတ်ဆတ်သောငါး ပြီးတော့ သူ့ဆီက အကောင်းဆုံးကို ရွေးပါ- သူ့အသားကင်။ ၎င်းအတွက် အကောင်းဆုံးမျိုးစိတ်များထဲမှ တစ်မျိုးမှာ ပရိုတင်းရရှိရန် ၎င်း၏ခါးကို သန့်စင်ပြီးသည်နှင့် တုံးထားသော Alaska pollock ဖြစ်သည်။ surimi ဆိုတာကို ဖြေဆိုတဲ့အခါ ဒီအချက်တွေကို သိထားဖို့က အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ အခွင့်ကောင်းယူခြင်းဖြင့် လတ်ဆတ်သောငါးခါးsurimi သည်aအကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာ သူနဲ့တူတဲ့ ဒီအစားအစာအတွက် သင်၏အကျိုးခံစားခွင့်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။.
ထို့ကြောင့် ဤအစားအစာတွင် မည်သည့်အရာမျှ မပြောင်းလဲပေ။ လုပ်ထားတဲ့ အခြေအနေတွေက အဲလိုဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ “နီးပါး” လို့ ပြောကြတယ်။ ဒီသဘောအရ ဆူရီမီလိုမျိုးပေါ့။
Krissia® ကို ပရိုတင်း၏ အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးနှင့် လတ်ဆတ်မှုရရှိရန် အပူချိန်နိမ့်သောအချိန်တိုင်းတွင် ပြုလုပ်ထားသည်။. သို့သော်၊ မည်သည့်ထုတ်ကုန်ကိုမှမဝယ်မီ အာဟာရဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုဖတ်ရန် အမြဲအထောက်အကူဖြစ်စေသည်။ ဤနည်းအားဖြင့် Krissia® surimi ဘားများ ကြာရှည်ခံဆေး သို့မဟုတ် အရောင်အတုများ မပါဝင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့သည် အစားအစာဘေးကင်းရေး အာမခံချက်အဖြစ် ပါစော်သန့်စင်မှုကို ရွေးချယ်ကြသည်။ ဤနည်းလမ်းသည် နို့နှင့် ဒိန်ချဉ်ကဲ့သို့ အခြေခံ အစားအစာများတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရေခဲသေတ္တာထဲတွင် ဆူရီမီကို သင့်လက်ထဲတွင် အမြဲရှိနေစေနိုင်သည်။.
ငါး၏ အကောင်းဆုံး အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသောကြောင့် ဆူရီမီတွင် ပရိုတင်းဓာတ်များစွာ ရရှိနိုင်သည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အမိုင်နိုအက်ဆစ်များ အားလုံးပါဝင်ပါသည်။ သူတို့အတွက် ထင်ရှားသည်။ အစာကြေလွယ်ခြင်းနှင့် အစာကြေလွယ်ခြင်း။.
အာဟာရ ပညာရှင်များ၏ အဆိုအရ ငါးပမာဏမှာ အကြံပြုထားသော ပမာဏဖြစ်သည်။ တစ်ပတ်လျှင်3နှင့်4စားသုံးခြင်း။. ၎င်းအတွက် တိုက်ရိုက်အစားထိုးမဟုတ်ဘဲ ၎င်းအတွက် ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သော အခြားရွေးချယ်စရာမရှိဘဲ ဆူရီမီကို စားသုံးပါ။ နေ့စဉ် ပရိုတင်းပမာဏကို တိုးစေပါတယ်။ နှင့် အခြားအညီအမျှ အရေးကြီးသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရှိသည်။ ဟိ ဆူရီမီဘားများ ပါဝင်ပါတယ်။ အိုမီဂါ 3၊ အချို့သော polyunsaturated fatty acids သည် နှလုံးသွေးကြောကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဗီတာမင် B12တိရစ္ဆာန်၏မူရင်းအစားအစာများတွင်သာပါဝင်ပြီး ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို လျှော့ချပေးသည်။ တွင်ရှိသောအခြားဒြပ်စင်များ ဆူရီမီဘားများ အဆိုပါများမှာ သတ္တုဓာတ် ဆယ်လီနီယမ်ကဲ့သို့ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ခံအားစနစ်၏ ကောင်းမွန်သောလုပ်ဆောင်ချက်အတွက် အရေးကြီးပါသည်။
ထို့ကြောင့်၊ သင်သည် ကောင်းမွန်စွာစားလိုပြီး သင့်အစားအသောက်အတွက် စိတ်ပူပါက၊ surimi သည် သင်၏ဟင်းလျာများကို ပြီးပြည့်စုံစေပြီး ကြွယ်ဝစေမည့် အကောင်းဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » နေအိမ် » ဆူရီမီဆိုတာ ဘာလဲ၊ အဲဒါက ဘာနဲ့လုပ်တာလဲ။
ကျောက်ဖြူ- သင့်အိမ်အတွက် ကြယ်ပွင့်ထုတ်ကုန်